Casa Maria-Vela uMoya oKhethekileyo weNdalo
ICasa Maria yindawo enomtsalane kunye nenhle yokuzimela eyanelisa ukulangazelela
ubulula, ukucaca, kunye nokurhoxa kwindalo enyulu. Ayinamandla okufumana abantu ukuba banxibelelane neendawo ezibangqongileyo, kodwa kunye nabo kunye nabo babathandayo. Inika amadoda nabasetyhini banamhlanje isithembiso sento aqhele ukuyenza amaziko asezidolophini: ukuzola, ukuphumla, ukungabi nakufikelela, ukubuyela kwizinto ezisisiseko, ukuziva ungumntu kwakhona. Sikwanikezela ngamandla okuvuselela ka
I-massage kwindawo yakho eyenziwe ngumbuki zindwendwe wakho uLili.
I-Casa Maria, kunye nekhaya lamaplanga lika-Lili & Ivo, emi kumda wePaki yeSizwe i-Apuseni, eTransylvania, kwipropati eyi-20.000 m². I-cottage yakhiwe ngabachwephesha basekuhlaleni ngothando kunye nokuzinikela ngexesha le-2015-2016. Kwigumbi lokuhlala elihonjiswe kakuhle, eliphangaleleyo unokufumana iifestile zamaFrentshi ezikhokelela kwiveranda ejonge emazantsi kunye nesitovu sakudala, esenziwe ngesandla seterracotta esinokuthi sijike iCasa Maria kwiqondo lobushushu elipholileyo ngeentsuku ezibandayo kunye netafile yokutyela. Iifenitshala ezahlukeneyo ezenziwe ngentliziyo nangomphefumlo zizinyanya zomninimzi zihombisa igumbi. Ibhedi entsha yesofa (2.04 x 1.40m) igqibezela igumbi lokuhlala. Ngokusebenzisa izitepsi eziguquguqukayo, eziqinileyo zomthi kukho ukufikelela kwi-loft ebanzi (i-mezzanine) enebhedi enkulu ye-Swiss-Flex (2.10 x 1.80m). Xa kukho isibhakabhaka esicacileyo uya kuba nombono omhle apha ngakwisibhakabhaka esineenkwenkwezi. Yonke ifestile kumgangatho ophantsi ifana nomzobo ophilayo onemibono eluhlaza. Ukulandela ukusuka kwigumbi lokuhlala ungafumana ikhitshi elipholileyo, elenziwe ngudade womninimzi, lixhotyiswe ngazo zonke izinto eziluncedo. Indawo yokwenyani yoxolo, umoya osempilweni kunye nendalo enyulu kwaye ke ngoko ifanelekile kumntu ngamnye ukuba arhoxe, iveki yokubhala okanye ukuyila, okanye ukukhupha ingqondo.
ICasa Maria ikwindawo enemithi egqagqeneyo malunga neemitha ezingama-900 (2700 ft.) ukuphakama. Ukuhamba apha ungabonanga mntu ngumthetho kunomkhethe. Kodwa unalo ithuba lokudlula iinkomo namahashe alahlekileyo. Ukusuka kwi-cottage kukho iindlela ezininzi zokuhamba. Iikhilomitha ezintlanu kude yi-hamlet yaseBelis, apho unokuya kuthenga igrosari kwiivenkile ezimbini ezilula. Rhoqo ngeCawe kusasa kukho imarike enoluhlu olubanzi lokutya neziselo ezitsha ngamafama asekuhlaleni. E-Belis ikwayindawo enkulu yokugcina amanzi, apho imozulu entle iyindawo entle yokuqubha okanye ukuqasha isikhephe. Idolophu enkulu i-Huedin, enezitolo ezinkulu ukuya kuthi ga ezintathu, imalunga neekhilomitha ezingama-25. Apha rhoqo ngoLwesibini kukho imarike apho abantu bevela kulo lonke ummandla. UHuedin waziwa ngamabhotwe aseGypsy anophahla olukhazimlayo. Iyakukhumbuza ngeIndiya. Amabhotwe anee-turrets, izinyuko zesikhumbuzo, uphahla lwaseMpuma, iipagodas, iintsika zebalcony ostensive, iintsika zekhonkrithi kunye neegutter eziqingqwe ngokucokisekileyo kunye nemibhobho ephantsi. Akukho nalinye kumakhaya agqityiweyo, kodwa mhlawumbi yinjongo leyo. ICluj-Napoca, esona sixeko sibalaseleyo eYurophu ongazange uve ngaso, yintliziyo yeTransylvania kwaye ikumgama oziikhilomitha ezingama-75. Isixeko esidlamkileyo sabafundi esinezinto ezininzi ekufuneka zenziwe. Ukuhamba okufutshane ngemoto, kukho iindawo ezininzi zendalo onokuthi uzityelele, nganye yahlukile kwindalo. Kwisithuba seyure enye enesiqingatha ngemoto ungayifumana ipaki yesizwe yase-Apuseni, apho unokuhamba khona nokukhwela ihashe. Le paki yaziwa ngenani elikhulu lemiqolomba, apho eyona idumileyo ngumqolomba webhere (Peștera Urșilor).
Indawo yasezilalini ikwindawo enemithi egqagqeneyo malunga neemitha ezingama-900 (2700 ft.) ukuphakama. Ukuhamba apha ungabonanga mntu ngumthetho kunomkhethe. Kodwa unalo ithuba lokudlula iinkomo namahashe alahlekileyo. Ukusuka kwi-cottage kukho iindlela ezininzi zokuhamba. Iikhilomitha ezintlanu kude yi-hamlet yaseBelis, apho unokuya kuthenga igrosari kwiivenkile ezimbini ezilula. Rhoqo ngeCawe kusasa kukho imarike enoluhlu olubanzi lokutya neziselo ezitsha ngamafama asekuhlaleni. E-Belis ikwayindawo enkulu yokugcina amanzi, apho imozulu entle iyindawo entle yokuqubha okanye ukuqasha isikhephe. Idolophu enkulu i-Huedin, enezitolo ezinkulu ukuya kuthi ga ezintathu, imalunga neekhilomitha ezingama-25. Apha rhoqo ngoLwesibini kukho imarike apho abantu bevela kulo lonke ummandla. UHuedin waziwa ngamabhotwe aseGypsy anophahla olukhazimlayo. Iyakukhumbuza ngeIndiya. Amabhotwe anee-turrets, izitebhisi ezikhulu, uphahla lwaseMpuma, iipagodas, iintsika zebalcony ostensive, iintsika zekhonkrithi kunye neegutter eziqingqwe ngokucokisekileyo kunye nemibhobho ephantsi. Akukho nalinye kumakhaya agqityiweyo, kodwa mhlawumbi yinjongo leyo. ICluj-Napoca, esona sixeko sibalaseleyo eYurophu ongazange uve ngaso, yintliziyo yeTransylvania kwaye ikumgama oziikhilomitha ezingama-50. Isixeko esidlamkileyo sabafundi esinezinto ezininzi ekufuneka zenziwe. Ukuhamba okufutshane ngemoto, kukho iindawo ezininzi zendalo onokuthi uzityelele, nganye yahlukile kwindalo. Kwisithuba seyure enye enesiqingatha ngemoto ungayifumana ipaki yesizwe yaseApuseni, apho unokuhamba ngeenyawo kunye nokukhwela ihashe. Ipaki yaziwa ngenani elikhulu lemiqolomba, apho eyona idumileyo ngumqolomba webhere (Peștera Urșilor).